Reon2 F နဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းဓာတ်ပုံတွေ ရအောင် ဘယ်လိုရိုက်ကူးကြမလဲ? - PX
Reon2 F နဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းဓာတ်ပုံတွေ ရအောင် ဘယ်လိုရိုက်ကူးကြမလဲ?
ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ စမတ်ဖုန်းကင်မရာနဲ့ အလှပရှုခင်း ဓာတ်ပုံတွေ၊ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံတွေနဲ့ ညဖက်မှာ ကောင်းကောင်းရိုက်ချင်သူတွေအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Tips လေးတွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး သိစေချင်တာက ပြောသွားမယ့် အကြောင်းအရာထဲမှာ ဘယ်ဖုန်းနဲ့မဆို လေ့လာနိုင်မယ့် အခြေခံ အချက်တချို့ ထည့်သွင်းထားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ နမူနာအနေနဲ့ OPPO ကနေ နောက်ဆုံး မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Reno2 F နဲ့ ယှဥ်တွဲ ဖော်ပြသွားမှာပါ။
Reno2 F မှာဆိုရင် ပင်မကင်မရာကို 48MP အသုံးပြုထားပြီး Aperture 1.7 ရှိပါတယ်။ သီအိုရီအရ ပြောရင်တော့ Aperture နည်းလေ အလင်းဝင်အားကောင်းလေ ဖြစ်တဲ့အတွက် သာမန်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေ ဖမ်းယူပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ပင်မရာကင်မရာနဲ့ Outdoor ၊ Landscape ပုံတွေရိုက်ကူးဖို့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 48MP ကိုယ်တိုင်က Wide-angle ပုံတွေ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့အတွက် ခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ရူခင်းအလှတွေ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Detail ပိုကောင်းပြီး မြင်ကွင်းကျယ်ပုံရိပ်တွေ ရိုက်ကူးချင်တယ်ဆိုရင် Ultra-wide Lens သုံးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ပင်မကင်မရာနဲ့လည်း ရိုက်ကူးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် Wide Angle Lens တွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ အရာ (Object) တွေကို Detail ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် Wide Lens နဲ့ အဖွဲ့လိုက်ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးနိုင်သလို ကိုယ်အသားပေးချင်တဲ့ ရှုခင်းအလှနဲ့ Scene တွေကို အနုစိပ်ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ Reno2 F မှာ 8MP Ultra-wide Lens တပ်ဆင်ထားပြီး Aperture 2.2 ရှိတဲ့အတွက် မြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်ချက်တွေကို အထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပြီးသွားရင် စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေ စိတ်ဝင်အစားဆုံးအချက်က Portrait အလှပုံတွေ ရိုက်ဖို့ပါ။ အထူးသဖြင့် လူကိုအဓိကထားရိုက်တယ်ဆိုမယ့် ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Portrait Lens ဒါမှမဟုတ် Depth Sensor တွေဟာ ကိုယ်အသားပေးရိုက်ချင်တဲ့ အရာကို နောက်ခံပုံရိပ်နဲ့ သိသိသာသာ ကွဲပြားသွားစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် အလှအပကို ဦးစားပေးလာတဲ့ အခါမှာတော့ Beauty Photography ၊ Portrait Bokeh ၊ HDR Portrait နဲ့ A.I Beauty နည်းပညာတွေ ထည့်သွင်းလာပါတယ်။ နည်းနည်းလေး အကျယ်ချဲ့ပြောရင်တော့ Portrait Bokeh ဆိုတာဟာ ကိုယ်အသားပေးရိုက်ချင်တဲ့အရာနဲ့ နောက်ခံပုံရိပ်ကို Blur လုပ်ချင်တဲ့ Level ကို မရိုက်ခင်မှာ Adjust လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် Portrait ဓာတ်ပုံတွေကို Semi-Pro ကျကျ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တခု HDR Portrait ဆိုတာကတော့ ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာ အလင်းပြင်းအား မတူတာ ဥပမာ တချို့နေရာ ဖြူလွန်းနေပြီး တချို့နေရာမှာကျ မှိန်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါကို Adjust လုပ်ဖို့ High Dynamic Range နည်းပညာနဲ့ Over/Under Illuminated နေရာတွေကို တသမတ်ထဲဖြစ်သွားအောင် ရိုက်ကူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကိုတော့ Reno 2F ရဲ့ ပင်မကင်မရာက စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး A.I နဲ့ Beautify လုပ်တဲ့ နည်းပညာကို ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းအားလုံးမှာ သုံးနေကြတာ သိမယ်ထင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက A.I နဲ့ လှအောင်လုပ်လိုက်ရင် Skin Tone က အရမ်း Smooth ဖြစ်သွားပြီး လိုတာထက် ပိုလွန်းနေတော့ မကြိုက်ကျသူတွေ ရှိပါတယ်။
Reno2 F မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ A.I Beauty ကတော့ အဲ့လို မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ နောက်ခံ အလင်း၊ အမှောင်အနေထားလိုက် လူရဲ့ အသားရောင်ကို ဖြည့်တင်း၊ လျှော့နိုင်သလို ဘယ်လောက် Level အထိ Smooth ဖြစ်အောင် လုပ်မလဲ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခါထဲပါလာတဲ့ Mode ၄ မျိုးကို အသုံးပြုပြီး ပုံရိပ်တွေကို စိတ်တိုင်းကျ ဖမ်းယူစေနိုင်ပါတယ်။
ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ပြောချင်တဲ့အချက်က Reno2 F မှာ 2MP Mono Lens ဆိုပြီး သီးသန့်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီကင်မရာရဲ့ အားသာချက်က စမတ်ဖုန်းမှာ Portrait Mode ကိုပဲ ၇ မျိုးလောက်ထိ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖက်ရှင်အမြင်ရပြောရရင် ပိုပြီး စတိုင်ကျ လှပတဲ့ပုံတွေ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အခုလို ကျောဘက်ကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက်အပြင် Selfie ကင်မရာကလည်း တစ်ခါတရံ Portrait ပုံရိုက်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလှပုံရိုက်ချင်တဲ့အခါမှာလည်း ကင်မရာ အရည်သွေးကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ Reno2 F မှာ 16MP Pop-up Selfie Camera ပါဝင်ပြီး A.I Beauty နဲ့ Portrait Mode တွေနဲ့ အားဖြည့်ထားပါတယ်။
တတိယ အရေးကြီးဆုံးကတော့ Night Mode ပါ။ ခုခေတ်ဖုန်းတိုင်းက ညဖက် အလင်းရောင် အားနည်းချိန်မှာ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်နိုင်ဖို့ ကိုယ်စီကိုယ်ဌာ နည်းပညာသစ်တွေ ဖန်တီးပြီး ထည့်သွင်းလာပါတယ်။
Reno2 F ရဲ့ Night Mode Photography ပြောရင်တော့ Noise နည်းဖို့ Multi-frame Analysis နည်းပညာကို အသုံးပြုပါတယ်။ အလင်းရောင် အားနည်းချိန်မှာ Sensor က ဖမ်းယူလိုက်တဲ့ပုံတွေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် A.I နည်းပညာနဲ့ တဖန်စစ်ထုတ်ယူပါတယ်။
နောက်ဆုံး Low Light အတွက် အရေးကြီးဆုံး 1.7 ရှိတဲ့ Aperture နဲ့ 1/2.25″ ရှိတဲ့ Ultra-Large Sensor ၂ ခုနဲ့ ၃ စက္ကန့်၊ ၄ စက္ကန့်စာ ဖမ်းယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Night Mode Photography တွက် သင့်တော်တဲ့ ပုံရိပ်ကို ရရှိစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် Reno2 F နဲ့ ညဖက် ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင် ဖုန်းကို ၅ စက္ကန့်လောက် ငြိမ်ငြိမ်လေး ကိုင်ထားပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ရိုက်ချက်တွေကို ညဖက် အလင်းရောင် အခြေနေနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီး ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ပြောလိုတာက Reno2 F မှာ 4000 mAh Battery ပါဝင်ပြီး VOOC Flash Charge 3.0 (20W) နဲ့ အမြန်အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ 8GB RAM နဲ့ 128GB Storage ပါဝင်တဲ့အတွက် (Mid-Range တန်းမှာ) စမတ်ဖုန်းနဲ့ အလှပ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးဖို့ သင့်တော်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ မြင်ပါတယ်။
နာရီဝက်အတွင်း အားအပြည့်သွင်းနိုင်မယ့် Graphene ဘက်ထရီကို စမ်းသပ်နေတဲ့ Samsung